रुखबाट निस्किएको पानीको धारोले वैज्ञानिक नै हैरान ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > मनाेरंजन > रुखबाट निस्किएको पानीको धारोले वैज्ञानिक नै हैरान !
January 8, 2020 January 8, 2020 GRISHI432
संसारमा केहि यस्ता रहस्यमयि ठाउँहरु छन् जुनको जवाफ वैज्ञानिकहरुसँग पनि हुँदैन । यस्तै एउटा घटना भारतको हरियाणा स्थित नुन्ह जिल्लाको पनि छ ।
नुन्ह जिल्लाभन्दा ३ किलोमिटर टाढा पर्ने यो ठाउँमा एउटा यस्तो रुख जहाँबाट अविरल पानी आईरहन्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यो पानी कहाँबाट आयो र अहिलेसम्म किन सुक्दैन भन्ने कुरा कसैले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
जो मानिसहरुलाई बिभिन्न रोगले सताउँछ उनीहरुले यो रुखबाट पानी भरेर लिएर जाने गर्छन् ।
बरु यता नारायण हिटि बाट टुडिखेल तिर लागाै, झुक्किएर नामसारि भैपाेहाल्छ कि!